MyanCare | Hepatitis C viral infection ခေါ် အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးအကြောင်း သိကောင်းစရာများ
သည်နေ့တော့ Hepatitis C virusလို့ခေါ်တဲ့ အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးအကြောင်း ဆွေးနွေးသွားပါမယ် ။
Hepatitis C virus ခေါ် အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုး ဘယ်လိုကူးစက်သလဲ ?
အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးသည် သွေးမှတဆင့်အဓိက ကူးစက်ပါတယ် ….
အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးပါသော သွေးသွင်းမိခြင်း ,အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးပါသော အပ်ဖြင့် ဆေးထိုးခြင်း , ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးခြင်း , နားဖောက်ခြင်း , အပ်စိုက်ခြင်း , အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးရှိသောသူနှင့် ဘလိတ်ဓား မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓား သွားတိုက်တံ အစရှိသည်တို့ကို အတူတကွသုံးစွဲခြင်း တို့အပြင် အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးရှိသောသူနှင့် အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်း တို့မှလဲ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်…
ထို့အပြင် အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးရှိသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ဆီမှ ကလေးကိုလဲ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလူတွေက ကူးစက်ခံရနိုင်ချေများလဲ ?
သွေးခဏခဏသွင်းရလေ့ရှိသူများ , သွေးကြောအတွင်း မူးယစ်ဆေး , အကြောဆေးထိုးလေ့ရှိသူများ , လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သွေး နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထိတွေ့မှုရှိသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ , ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးလေ့ရှိသူများ , နားခဏခဏဖောက်လေ့ရှိသူများ , လိင်ဆက်ဆံဖော်များသူများ စသည့်သူများက ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ချေများပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးကူးစက်ခံရသူအနည်းငယ်သာ Non-specific prodromal illnessလို့ခေါ်တဲ့ ဘယ်ရောဂါဖြစ်နေလဲတိတိကျကျမပြောနိုင်သော လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း , မစားချင်မသောက်ချင်ဖြစ်ခြင်း , ပျို့အန်ခြင်း , ဝမ်းလျှောခြင်း , ဗိုက်အောင့်ခြင်း , ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း , အရိုးအဆစ် ကြွက်သားတွေ နာခြင်း , ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း , ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း အစရှိတဲ့ လက္ခာတွေကို
အသားမဝါခင် ရက်အနည်းငယ်ကနေ ၂ပတ်အတွင်း ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ ခံစားရလေးရှိပြီး အသည်းရောင်အသားဝါCပိုးကူးစက်ခံရသူအများစုကတော့ နာတာရှည်အသည်းရောင်ခြင်း , အသည်းကင်ဆာဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ် ။
အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးရှိကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ?
Anti HCV antibodiesလို့ခေါ်တဲ့ အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးဝင်လာရင် ခန္ဓာကိုယ်က ပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့ Antibodiesခေါ် ကိုယ်ခံအားကိုစစ်ခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးကူးစက်ခံရသူ အချို့သည် လတ်တလေ အသည်းရောင်အသားဝါခြင်း သာမာန်ရောဂါလက္ခဏာသာခံစားရပြီး သက်သာသွားသော်လဲ အများစုမှာ နာတာရှည် အသည်းရောင်ခြင်း , အသည်းခြောက်ခြင်း နှင့် အသည်းကင်ဆာတို့အထိ ဖြစ်နိုင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါ C ပိုးအတွက်Antiviral agents တွေကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း စနစ်တကျကုသမှုခံယူပါက ကုသမှုခံယူပြီး ၃လမှ ၆လအတွင်း ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
အနားယူခြင်း , ရေများများသောက်ခြင်း , အရက်ရှောင်ခြင်း , အာဟာရပြည့်စွာ စားသောက်ခြင်း အစရှိသည်တို့လဲ လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
ရောဂါပိုးကင်းစင်ကြောင်းစစ်ဆေးထားသော သွေးကိုသာသွင်းခြင်း , အခြားသူတစ်ဦး၏ သွေးနှင့်ဆက်စပ်သော ပစ္စည်းကို တိုက်ရိုက်မထိမိစေရန် သတိထားကိုင်တွယ်ခြင်း , တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ကို အသုံးပြုခြင်း , အသုံးပြုပြီးသော ဆေးထိုးအပ်များကိုလဲ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ခြင်း , ဘလိတ်ဓား , မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓား , သွားတိုက်တံ အစရှိသည့်
တစ်ကိုယ်ရည်သုံးပစ္စည်းများအား သီးခြားစီအသုံးပြုခြင်း , အသည်းရောင်အသားဝါ Cပိုးရှိသူနှင့် လိင်ဆက်ဆံရင်လဲ အကာအကွယ်အသုံးပြုခြင်း အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။